ရှန်ကျန်းပူးတွဲနည်းပညာ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ရှန်ကျန်းပူးတွဲနည်းပညာ Co. , Ltd မှမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် '' jointech '' 2006 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်စတော့ရှယ်ယာကုဒ်နှင့်အတူ, ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ခုနှစ်တွင်အသစ်သုံးမျိုးဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် formallylisted ခဲ့သည်: 835897 ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီမိုဘိုင်းပစ္စည်း monitoringand စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ networking အစိတ်အပိုင်းများပံ့ပိုးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ leadingmobile ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်အော်ပရေတာဖြစ်လာမှကျူးလွန်နေသည်။ ofdevelopment နှစ်နှင့်စုဆောင်းခြင်းပြီးနောက်ကုမ္ပဏီ၏အဓိကအဖြစ်ပြည့်စုံတစ်စုံ ofintelligent ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုမိုဃ်းတိမ်ကို managementplatform, အဆင့်မြင့်သော software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူစျေးကွက်များကိုလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် regardenergy စားသုံးမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည် တန်ဖိုး။
လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့် vehicleposition မဆိုင်ပါဘူးသူကိုမော်တော်ယာဉ်အော်ပရေတာကုမ္ပဏီများအတွက်, 1. အွန်လိုင်းမော်တော်ယာဉ်နှင့်လောင်စာသုံးစွဲမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှု; Thecompany ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်သုံးအဓိကဝေးလံခေါင်သီတဲ့အရာတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲမှု segments များဖုံးလွှမ်း ကုန်တင်လုံခြုံရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအကြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်သော client များအတွက်ကွန်တိန်နာများနှင့်ကုန်တင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ 2.the လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး, စွမ်းအင်နှင့် powerequipment ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကုမ္ပဏီကွန်ရက်ကန်ဆောင်မှုများ 3.remotemonitoring နှင့်စစ်ဆင်ရေး။
အော်တိုထိန်းချုပ်လယ်ပြင်၌ကျော်ကိုနှစ် 30 အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးတို့ကဦးဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D အဖွဲ့သည်ကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူအများအပြားထူးခြားသောထုတ်ကုန်များနှင့် software ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ: အဆိုပါ R & D အဖွဲ့သည် etc.Our R & D အသင်းအကြီးတန်းနှင့်အ Midlevel နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းများနှင့်အတူ 30 ကျော်အင်ဂျင်နီယာများတက် လုပ်. , သို့ကွဲပြားကိုလည်းရှန်ကျန်း University မှဘွဲ့ရဌာနနှင့်အတူပူးပေါင်းအဲဒီ 55 နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ အုပ်စု, ဆော့ဝဲ Group မှ, စမ်းသပ်ခြင်း Group မှ, Project မှအုပ်စု, နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအုပ်စုတစ်စု; JOINTECH နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း R & D သို့ရောင်းအားပမာဏ၏ 8% ~ 15% ချပြီးစောင့်ရှောက်လော့။
JOINTECH တစ်နေ့လျှင်စမ်းသပ်ခြင်းစွမ်းရည် 500pcs နှင့်အတူမြင့်မားသောတိကျလောင်စာဆီအဆင့်အထိအာရုံခံကိရိယာများအတွက်တရုတ်အတွက် withyearly စွမ်းရည် 100,000 လောင်စာအဆင့်ကိုအာရုံခံကိရိယာများ, ပထမဦးဆုံးအော်တိုစမ်းသပ်စက်လိုင်းစုဝေးချီတက်ထူထောင်လာနိုင်အောင်တွစ်တာသိရသည်။